Mararaa Guddinaa: “Uummanni hatattamaan nama filateen buluu qaba” - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMararaa Guddinaa: “Uummanni hatattamaan nama filateen buluu qaba”
Mararaa Guddinaa: “Uummanni hatattamaan nama filateen buluu qaba”
Ajjeechaan torbaan lamaan darbee keessa Naannoo Amaaraa fi Finfinneetti mudate siyaasni biyyattii rakkoo keessa jiraachu kan mul’isudha jedhan hayyuun siyaasaa gameessi pirofeesar Mararaa Guddinaa.
(bbcafaanoromoo)—-Sabni motummaarraa komii yoo qabaate, hanqinni gurguddaan yoo jiraate, mootummaan na miidhaa jira ykn naaf hin hojjanne sabni jedhu yoo jiraate yaalii fonqolchaatiif kaka’u mala jedhu.
Gareen gaaffiiwwan kanneen humnaan hiikuun qaba jedhe yaadu yoo jiraate ammoo taateen akka kanaa dhalachu danda’a jedhu.
Qaamooleen yaalicha raawwantan sababiin isaanii gahaadha moo miti kan jedhuuf deebii kennuu kan qaban garuu isaanumadha jedhu.
‘Abjuu nuti Itoophiyaadhaaf qabnutu wal hin fakkaatu’
‘Qalama qofaan osoo hin taane qawwee hidhannee loluuf qophiidha’
Oromiyaa keessatti hidhaan babal’achuun himame
“Walamugaalatti yaaliin taasifame kun rakkoon biyya kana keessa jiraachu kan agarsiiseedha” kan jedhan piroofeesar Mararaan, balaa hamaa qaqqabsiisuu akka malu akeekaniiru.
“Osoo ajjeechaan raawwatame sun minisitira mummeerratti kan aggaamame ta’ee gara wal-waraansa (civil war) badaatti galama ture” jedhu.
Filannoo akka furmaataatti
Rakkoon jiru haalawwan ittiin hiikamu danda’u keessa tokko filannoo gaggeessudhaan kan jedhan hayyuun kun, qaamoleen mootummaan amma jiruu bakka na hin bu’u jedhanis deebii kan argatan yoo filannoon gaggeefamee qofaadha jedhu.
Dhimmi filannoo biyyaalessaa bara dhufuu yeroo qabameefitti raawwachuu fi dheeressuu paartilee siyaasaa iddoo lamatti qoodeera.
Gariin yeroo qabameefitti raawwatamuu qaba yoo jedhan gariin ammoo rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabuu amma jiru eeruun dheerachuu qaba jedhanii falmu.
Kanneen osoo rakkooleen biraa hin hiikamiin filannoo gaggeessuun hin danda’amu jedhan, “eenyu uummataa haa tasgabbeessuu, eenyuu hojii manaa haa hojjatuu gaaffiilee jedhaniif deebii qabatamaa hin qaban” jedhu pirofeesar Mararaan.
“Haala uummanni tasgabbaa’ee gara filannootti galurratti hojjachuun alatti, ololli gara biraa rakkina biyyattiin amma keessatti argamtuuf furmaata hin ta’u” jedhaniiru.
Kanaan alatti qaamooleen rakkoon lafa jiran dura yaa sirraa’an jedhan, eenyu akka sirreessuuf barbaaduu? jechuun gaafatu.
“Oromoo ofii nyaatee saba biraas nyaachisun arguu barbaada”
Motummaanis akka motuummaatti waan irraa eegamu raawwachuun, dhaabbileen mormituus gamaa gamana dhaabbatanii wal ajjeessuurra ajandaa waloo ta’ee lafa kaawwachuun irratti hojjachuu qabaatu jedhu.
Sabnis akkasuma paartilee siyaasaatiin egeree keenya hin balleessinaa, walii galaa jechuun dhiibbaa taasisuu qabaata jedhaniiru.
Hunda caala motummaan waliigaltee biyyaa fiduudhaaf, paartilee siyaasaa deeggarsa sabaa qaban waliin gadi taa’ee marii’achuu qaba jedhaniiru.
‘Bakka nu hin buutan’
Filannoon yeroo jedhamee keessatti hin gaggeeffamu yoo ta’ee rakkoon dabballee amma jirtu isiin bakka nu hin buutan jechuun mudataa jiru dhaabbachuu hin danda’u jedhu.
”Bakka nu hin buutan gaaffiin jedhu kan dhaabbatu wayita ummanni nama filateen buluu jalqabuu qofaadha” jedhan.
”Siyaasni biyya kanaa gama tokkoon fayyise yoo jettee gama biraatiin si jalaaa gadii nam’a” kan jedhan Dr Mararaan, kana dhaabuuf ummanni hatattamaan nama filateen buluu qaba jedhu.
Yoo filannoon gaaggeeffamuu baate ammoo jequumsi gama hedduun adeemsifamu itti fuufa jechuun sodaa filannoo tursiisuun qabaatu ibsu.
Boordiin filannoo seerawwan tokko tokko baasuu fi Ministirri Muummee paartilee mormitoota marisiisuu dabalatee waanni abdii namaaf kennan jiraatus biyyattiin rakkoolee gurguddaa qabadi jedhu.
Paartileen ADWUI afran wal dhaggeettiin waliin hojjachuurra miila wal harkiisaa adeemaa jiraachun isaanii yaaddoo olaanaa ta’uu eeraniiru.
Jijjiramni gubbaatti eegalamee gadii bu’ee hawaasa bira gahuu dhabusaatiif hawaasni komii guddaa qabaachuus hin dhoksine.
“Sagalee B/Jeneraal Asaamminew waraabeera” – Gaazexeessituu Faasikaa Taaddasa
Heera mootummaa ilaalchisee ”akkuma beekamu paartileen siyaasaa hundi keessatti qooda hin fudhannee. Haa ta’u malee, heerichaan hogganamaa gara itti aanutti cee’uuf yaaluun murteessadha” jedhu.
“Dura heera jijjiirra jechuun waan salphaatti raawwatamuu danda’u miti. Adeemsa hedduu gaafata.” jedhaniiru.
”Lakki jedhama yoo ta’e gaaffiiwwan attamiin sabni keessatti hirmaata, eenyutu raawwachisa, akkamiin jijjirama? kan jedhuuf deebiin kennamu qabaata,” jedhu.
Ammatti garuu wanti akka hatattamaan jijjiramu kan barbaadnu boordii filannooti jechuun dubbatu.